Shabakadda Hindisaha Daahfurnaanta Dowladda oo dib loo howlgeliyay – Kalfadhi
Shabakadda Hindisaha Daahfurnaanta Dowladda oo dib loo howlgeliyay
Wasaarada warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u howlgelisay shabakadda hindisaha daahfurnaanta dowladda ee loo yaqaano Open Government Initiative (OGI),sida ay baahisay warbaahinta dowladda.
Ku simaha wasiirka warfaafinta mudane Cabdiraxmaan Iidan Yoonis ayaa daah furay barnaamijkan.
Barnaamijkan waxa uu soo bandhigi doonaa xogta shaqo iyo waxqabadka wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya.
Agaasimaha wasaarada warfaafinta,mudane Cabdiraxmaan Yuusuf sheekh (Al Cadaala) ayaa ka hadlay muhiimada shabakaddan.
‘’ Marka koowaad barnaamijka waxaa loo baahday markii la dersay baahiyaha loo qabo in uu jiro farqi u dhexeeya dowladda iyo shacabka taasi oo ku saabsan in shacabku ay ogaadaan waxyaabaha ay dowladooda u hayso, ” Ayuu yiri, Al Cadaala.
Barnaamijkan ayaa door weyn ku yeelan doona xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya hey’addaha dowladda iyo shacabka ay u adeegayan.
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in ay muranka badda kala hadleyso Kenya
Afhayeenka golaha shacabka oo magacaabay madaxa xiriirka warbaahinta